FEPETRA ARA-PAHASALAMANA : “Misokatra ny zotra nasionaly, hiverina ny sidina mankany ivelany”
Mbola tsy tapitra tanteraka ny ady atao amin’ny valanaretina Covid 19. Manohy hatrany ny ady hoentina hivoahana ao anatin’ity areti-mandoza ity ny fitondram-panjakana Malagasy. 21 septembre 2020
Na izany aza anefa dia miroso tsikelikely miala tanteraka amin’ny fihibohana I Madagasikara. Teboka lehibe ao anatin’izany ny famerenana amin’ny laoniny ny fifamoivoizana an-tanety, an-dranomasina sy an’habakabaka ho an’ny sidina anatiny sy ivelany.
Miditra ao anatin’ny hamehana ara-pahasalamana ho an’ny 15 andro manaraka indray i Madagasikara. Tapaka izany nandritra ny filan-kevitry ny Minisitra izay natao tamin’ny sabotsy hariva lasa teo. Midika izany fa mbola miatrika ady ara-pahasalamana i Madagasikara ary mbola manan-kery avokoa ireo fepetra fanakanana rehetra hoentina hifehezana ny tsy hiparitahan’ny tsimok’aretina Coronavirus.
Raha hatao ny tomban’ezaky ny fivoaran’ny valanaretina tao anatin’iny tapa-bolana farany iny dia efa azo lazaina ho tsy mitsaha-mihena ny isan’ireo olona vaovao mitondra ny tsimok’aretina.
Nihena ho 30% ny tahan’ireo olona mitondra ny tsimok’aretina tato anatin’ny iray volana farany. Raha ny tarehimarika farany dia tsy nisy afa-tsy 33 izany. Hatreto mananika ny 1 6000 ny fitambaran’ireo olona voaporofo fa mitondra ny tsimok’aretina teto Madagasikara. Hatrany amin’ny 91% ny taham-pahasitranana ankehitriny raha 1,3% kosa ny taham-pahafatesana. “Hiezaka ny hametraka rafitra vaovao ary hitondra fampitaovana hoentina hanohizana ny ady amin’ity valanaretina ity ny fitondram-panajakana”, hoy ny Praiminisitra Ntsy Christian. Omaly alina no nitondra fanazavana mahakasika an’ireo fanapahan-kevitra noraisin’ny fitondram-panjakana hoentina hiatrehana ny 15 andro manaraka indray ny tenany. Amin’ny ankapobeny tsy nisy fiovana firy toy ny tamin’ny 15 andro teo aloha ireo fepetra noraisina saingy nohalefahana kosa indrindra ho an’ny sehatry ny fitanterana. Tao anatin’ny tafa mivantana nataon’ny Filoha Andry Rajoelina tamin’ny vahoaka Malagasy ny alahady 6 septambra lasa teo dia efa nisy tamin’ny ampahan’ireo zotra nasionaly no naverina tamin’ny laoniny araka ny tetiandro mazava izay napetraka mba hisian’ny fandaminana.
Ho an’ny tapa-bolana manaraka ity dia nambaran’ny Praiminisitra fa miverina misokatra avokoa ny zotra nasionaly rehetra, afaka miasa ny taksiborosy rehetra manao ny asa fitaterana amin’ny lalam-pirenena. Tafiditra ao anatin’izany ny zotra mampitohy an’Antananarivo sy Toliara, Antananarivo sy Antsohihy, Antananarivo sy Morondra, Antananarivo sy ny Faritra Atsimo rehetra iny, Antananarivo sy Antsiranana, ary Antananarivo sy Sambava, izay hisokatra manomboka ny 26 septambra ho avy izao. Tahaka ny an’ireo zotra nasionaly efa nandray ny asany teo aloha dia mihatra ary hentitra ny fanaraha-maso an’ireo fiara mpitatitra eo anatrehan’ny fanarahan’izy ireo ny fepetra ara-pahasalamana eo am-piaingana ny toby fiantsonana. Tsy maintsy raisina hatrany ny mombamomba ny mpandeha miaraka amin’ny dika mitovin’ny laharan’ny kara-panondro.
Hisokatra tsikelikely ny sidina mankany ivelany
Raha tsiahivina dia efa niverina nisokatra ny sidina an’habakabaka tamin’ny tapa-bolana. Nisantarana izany ny sidina tato anatiny izay niantsorohan’ny Kaompania Tsaradia. Mitohy hatrany izay fisokafan’ny sidina an’habakabaka anatiny ary hihitatra tsikelikely amin’ny fisokafan’ireo sidina mankany ivelany. Nambaran’ny Filoham-pirenena tamin’ireo mpandraharaha eo amin’ny sehatry ny fizahan-tany tany Nosy Be fa ny volana oktombra mitsidika no hiverina amin’ny laoniny ny fizahan-tany ao an-toerana. Araka izany dia noentin’ny tatitra nataon’ny Praiminisitra omaly alina fa ny fiandohan’ny volana oktobra no hiverina hisokatra amin’ny fomba ofisialy ny sidina avy any ivelany mihazo an’i Nosy Be. Tahaka izany ihany koa dia hosokafana miandalana ireo seranam-piaramadina hafa any amin’ny Faritra toy ny any Antsiranana, Toamasina ary Taolagnaro ka ny sidina ato anatin’ny ranomasimbe Indianina toy ny avy atsy Maorisy, Seychelles, Kaomoro ary La Réunion no hisantarana izany aloha. Ny fivezivezen’ireo mpandeha amin’izany anefa dia tsy maintsy manaraka feno an’ireo fepetra ara-pahasalamana mba tsy hiverenan’ny fihanahan’ny valanaretina eto amintsika.
Mahakasika ny fitaterana anaty rano kosa indray dia afaka miasa ireo sambo mpitatitra an-dranomamy sy an-dranomasina. Tahaka an’ireo fitaterana rehetra dia hajaina hatrany ireo fihetsika fanakanana. Tsy azon’izy ireo hatao kosa anefa ny mitondra olona miditra sy mivoaka an’i Madagasikara ary henjana ny sazy ho an’izay tratra mandika izany. Amin’ny ankapobeny dia tsy misy fiovana ireo fepetra ho an’ny fiainan’ny mponina amin’ny andavanandro. Mbola manan-kery ireo fihetsika fanakanana rehetra. Ny fitondrana arovava sy orona, tsy maintsy manaja ny fepetra ara-pahasalamana ireo toerana rehetra ivezivezen’ny vahoaka. Tsy mbola misokatra kosa ny fifaninanana ara-panatanjahan-tena, azo atao ny fanazaran-tena fa ny fifaninanana mamory olona mbola tsy azo atao. Tsy fahafahana mivoaka amin’ny alina dia manomboka amin’ny 12 ora alina ka hatramin’ny 4 ora maraina ho an’ny Tana sy Diana. Ny famoahana razana dia mahazo alalana rehefa tsy matin’ny Covid 19 ary mbola tsy azo atao ny famadihana. Mitohy ny fahafahan’ireo toem-pisakafoana, toerana fanaovana “karaoke”, ny toeram-pisotroana, ny toerana fijerevana sarimihetsika izay ferana ho 100 ka hatramin’ny 200 ihany ny olona afaka manatrika izany, tahaka izany ihany koa ny fiangonana sy ny Mosqué manerana ny Nosy dia hatreo amin’ny 200 koa ny olona afaka miangona.
« Misy fetrany ny toerana politika »
Ankoatra ny ady amin’ny valanaretina Covid 19 dia nitondran’ny Praiminisitra fanazavana ihany koa ny raharaham-pirenena izay somary nihanafana tato ho ato. Nahitsy ny valin-kafatra noentin’ny Praiminisitra, Ntsay Christian manoloana ny fanakianana mivaivay ataon’ireo mpanohitra aminy amin’izao fotoana izao. Hatramin’ny naharaikitra ny fanatanterahana ny fifidianana loholona, izay hatao amin’ny 11 desambra izao, dia tsy nitsaha-niteny ireo antoko mpanohitra. Anisany voatonontonona amin’izany ny Praiminisitra izay voalazan’izy ireo fa manitsakitsaka ny lalàm-panorenana tamin’ny nananganana an’ilay vaomiera iombonan’ny Antenimieram-pirenena sy ny Antenimieran-doholona izay nandinika ny fankatoavana an’ireo didy hitsivolana noraisin’ny Filoham-pirenena. Nambaran’ny Praiminisitra Lehiben’ny Governemanta fa raha misy fitondram-panjakana tena fatra-panaja ny lalàm-panorenana dia ity fitondrana mijoro ankehitriny ity. Laharam-pahamehana apetraky ny fitondrana, hoy izy, ny fametrahana ny tany tan-dalàna. Nambarany fa ny fiandohan’ny volana febroary 2021 io no tapitra tanteraka ny fe-potoam-piasan’ireo Loholona am-perin’asa. Noho izany dia tsy maintsy hirosoana ny fifidianana Loholona satria ny politika na ny fijanonan’ny mpanao politika iray eo amin’ny toerana misy azy dia misy fetrany, raha ny fanazavana. Ankoatra izay dia voalazany ihany koa fa fitondrana ankehitriny dia mihaino ireo mpanohitra ary manaja tanteraka ny lalàm-panorenana mahakasika ny fanoherana eto Madagasikara.
Mipaka ho an’ny Distrika rehetra ny asa fampandrosoana
Na dia mbola miatrika ny hamehana ara-pahasalamana aza i Madagasikara dia tsy hatao sakana amin’ny fanatanterahana ny asa fampandrosoana izany. Mitohy ny fampandrosoana isam-paritra ary mipaka eny anivon’ny Distrika sy ny Kaominina. Asa maika ataon’ny fitondram-panjakana ny fananganana an’ireo fotodrafitrasa mamaly ny filàn’ny mponina. Porofon’izany ny efa fitsanganan’ireo sekoly manara-penitra amina Distrika maro manerana ny Nosy, hopitaly manara-penitra, ny kianja manara-penitra sy ireo asa fanamboaran-dalana marobe, ny fotodrafitrasa ho an’ny fambolena sy ny maro hafa. Tsy marina, hoy ny Praiminisitra, fa misy ny fanavakavahana faritra eo amin’izay lafiny fampandrosoana izay. Finiavana hamboly adim-poko izany, raha ny nambarany.
Notsiahivin’ny Praiminisitra fa ny Filoham-pirenena dia nametraka fanamby fa tsy hisy Distrika ho taraiky amin’ny fampandrosoana izany intsony eto Madagasikara manomboka izao. Koa noho izany na any Atsimo, na Andrefana , na Atsinanana na ny any Avaratra dia samy hahazo ny anjara fampandrosoany avokoa. Anisan’ny notanisain’ny Praiminisitra tamin’izany ireo tetikasa goavana mbola kasain’ny fitondrana hotanterahina toy ny fananganana Oniversite manara-penitra, trano mora, “buildings” mora sy ny maro hafa.
Miriaria eran’ny tanàna sahady ireo lehilahy nahavanon-doza FANAFIHANA MPIVADY TANY BETSIAKA -AMBILOBE (405) 22 octobre 2020 Nahanjahanjan’ny vahoaka irery ireo parlemantera mpanohitra AMBATONDRAZAKA (123) 26 octobre 2020 Tovolahy nisandoka ho mpitandro filaminana sarona ny alarobia teo ANKAZOMANGA (108) 22 octobre 2020 Jiolahy roa ikoizana sady gadra nitsoaka maty voatifitra FANAFIHANA TAO TAOLAGNARO (82) 26 octobre 2020 Lehilahy tompona “Agence de voyage” nadoboka am-ponja FIVADIHAM-PITOKISANA (65) 22 octobre 2020 Nahazo fankatoavana vonjimaikan’ny FIFA ny kianja Barikadimy BAOLINA KITRA - TOAMASINA (44) 22 octobre 2020